Wararka - Afar door oo muhiim ah oo kujira guntimaha guntimaha ee marinnada tareenka xawaaraha sare ku socda ee dhismaha tunnelka
Ugu horreyn, kanaalka horay loo sii aasay ee tunnelka xawaaraha sare ku socda ayaa xoojin kara dahaarka labada lakab isla markaana, wuxuu yeelan karaa saameyn guud oo wanaagsan oo xoog ah, waxaana jira dhinacyo badan oo xoogga ah inta lagu jiro howsha xoogga. Muhiimadu waa in la helo cudud isku mid ah. saameyn. Waxaa lagu horumarin karaa iyadoo laga jawaabayo daalka.
Marka labaad, waxaa jira faa iidooyin badan oo ah kanaallada gundhigga ah ee marinnada tareenka xawaaraha sare ku socda. Muuqaal kale ayaa ah inuu leeyahay iska caabin dab wanaagsan, taas oo ah, heerkulka sare, inta badan wax badan isma beddelo.
Tan seddexaad, ujeedka ugu weyn ee loo xiray kanaalka tareenka xawaaraha sare ku socda ayaa ah in laga hortago in catenary ay dhacdo, gaar ahaan in aan loo oggolaan in catenary-ka uu ku dhaco tareenka, haddii kale dhibaatooyin taxane ah oo qatar ah ayaa lala kulmi doonaa. Gaar ahaan kiisaska tiirarka sudhan, saxnaanta rakibidda waa in la hubiyaa.
Intaa waxaa sii dheer, habka hagaajinta jihada giraanta, marinka duugista marinka sidoo kale waa mid aad u habboon.
Si sax ah ayey ugu wacan tahay faa iidooyinkaas awgood in weelal biyoodyo gundhig leh si ballaadhan loogu horumariyey waddooyinka tareenka xawaaraha sare ku socda ee waddankayga. Horumarinta sayniska bulshada iyo tikniyoolajiyadda, shuruudaha dadka ee tayada kanaalka gundhigga u ah way sii kordhayaan. Haddii ay rabaan inay si isdaba joog ah u daboolaan baahiyaha macaamiisha, soo saarayaasha sidoo kale waxay leeyihiin shuruudo ku saabsan waxqabadka wax soo saarka ee geeddi-socodka soo saaridda marinnada dhuunta guntama. Horumarinta joogtada ah, tayada sidoo kale waa in si adag loo xakameeyo. Iyadoo loo marayo cilmi baaris isdaba joog ah iyo dib u gurashada baahida suuqa, waxaan soo saarnay kanaallo horay loo galiyay oo loogu talagalay marinnada dhuumaha qalooca ee gaarka u ah marinnada hoose iyo xawaaraha sare ee tareennada.